Boqolaal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda oo gudaha u galay magaalada Kismaayo – idalenews.com
Boqolaal askari oo ka tirsan ciidamada milateriga Soomaaliya ayaa gudaha u galay magaalada Kismaayo, kadib markii saddexdii todobaad ee la soo dhaafay ay ku sugnaayeen duleedka magaalada.
Ciidamadan oo safar dhulka ah kaga soo ambabaxay gobolka Gedo ayaa markii ay soo gaareen Kismaayo loo diiday inay gudaha u galaan magaalada.
Wararka laga helayo magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in Ciidamadan ay gudaha u galeen, markii maamulka KMG iyo wafdiga dowladda ee uu hogaaminayo Ra’iisul Wasaaraha ay ka wada hadleen arrinta ciidankan iyo inay yihiin ciidan ka tirsan dowladda oo loo soo wareejiyay Kismaayo.
Ciidamadan oo ku hubeysan gaadiidka dagaalka ayaa fariisin ka sameystay Warshadii Hilibka iyo xaafadaha ku dhow dhow, iyadoo saraakiisha hogaamineysa ay balan qaadeen inay ciidamada ka qeyb qaadanayaan sugida ammaanka.
Kismaayo oo ay haatan ku sugan yihiin wafdi heer sare ah ayaa waxaa dhinaca kale laga dareemayaa saxmad ciidan, taasoo dadka deegaanka ay wal wal ka qabaan in ciidamada faraha badan ee kala taabacsan labada dhinac inay isku dhacaan.
Dhinaca kale waxaa goor dhow magaalada Kismaayo ka soo ambabaxay wafdigii uu hogaaminayay Ra’iisul wasaare Saacid oo afartii maalmood ee la soo dhaafay ku sugnaa magaalada, iyagoo u soo ambabaxay magaalada Muqdisho, kadib markii uu guuldareystay wada hadaladii u socday.
Wararka ayaa sheegaya in la magacaabay Labo gudi oo dowladda iyo maamulka KMG, si ay u sii ambaqaadaan wada hadalada la isku mari waayay, waxaana labadan gudi kala hogaaminaya Wasiirka Arrimaha gudaha iyo Gudoomiyaha gudiga qaban qaabada shirweynaha maamul u sameynta, waxaana kulamadooda ugu soo horeeya ka dhici doonaa magaalada Muqdisho ama Nairobi.
Labada dhinac ayaa isku mari waayay qodobo muhiim ahaa, kaasoo dowladdu sheegtay inay ahaayeen kuwo dastuuri oo aan laga tanaasuli karin, kadib markii la isku qabtay maamul u sameynta iyo arrimaha federaalka, maamulida daqliga ka soo gala garoonka diyaaradaha iyo Dekeda Kismaayo.
C/naasir Seeraar “Dadkii naloo soo diray dad ku haboon oo mas’uuliyada loo igmaday ma aheyn, wada hadaladuna ma xirmin”